राजु सदा मृत्यु घटना : छानबिन समिति कागजमै सीमित, पिडीतले न्याय पाउला ? - Nepalese Timesराजु सदा मृत्यु घटना : छानबिन समिति कागजमै सीमित, पिडीतले न्याय पाउला ? - Nepalese Times
राजु सदा मृत्यु घटना : छानबिन समिति कागजमै सीमित, पिडीतले न्याय पाउला ?
नेप्लिज संवाददाता१२ श्रावण २०७७, सोमबार ०७:१२ (1 हप्ता अघि) ६६ जनाले पढ़िसके
काठमाडाै‌ं । समयमा उपचार नपाएर प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा मृत्यु भएका धनुषाका राजु सदालगायत विभिन्न घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही माग गर्दै विभिन्न जिल्लामा अर्धनग्न प्रदर्शन गरिएको छ । संयुक्त दलित संघर्ष समितिको अगुवाइमा आइतबार प्रदर्शन गरिएको हो ।
धनुषाको हंशपुर नगरपालिका–७ पर्साहीका राजु सदाको ९ असारमा प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै, सबैला नगरपालिका–१२ बरकुर्वाका शम्भु सदाको २८ जेठमा सबैला इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा मृत्यु भएको थियो ।
यीलगायत विभिन्न घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै धनुषा, सर्लाही, सिराहा र सप्तरीका विभिन्न स्थानमा सामूहिक प्रदर्शन गरिएको हो । जनकपुरमा जनक चोकबाट निस्केको अर्धनग्न जुलुस शिव, भानु, कदम चोक हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि धर्नामा बसेको थियो ।
जनक चोकमा आयोजित कोणसभामा दलित समुदायका अगुवाले एक महिना बितिसक्दा पनि घटनाको छानबिन नभएको, दोषीलाई बचाउन खोजेको भन्दै विरोध जनाए । एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी छानबिन समिति बनाए पनि अहिलेसम्म छानबिन नभएको उनीहरूको भनाइ थियो । उनीहरूले दोषीलाई बचाउन खोजेको भन्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरेका थिए ।
दोषीलाई कारबाही नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने संयुक्त दलित संघर्ष समिति धनुषाका संयोजक चन्देश्वर दासले बताए । समितिले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
जसमा १३ साउनमा प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा थाली तथा सिटी जुलुस प्रदर्शन निकालेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि धर्ना दिने, १५ साउनमा मृदंग बजाउने र पोस्टर टाँस्ने, प्रशासन कार्यालयअगाडि धर्ना दिने र १८ साउनमा प्रशासन कार्यालयअगाडि अनिश्चितकालीन रिले अनशन बस्नेलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम रहेका छन् ।
छानबिन समिति कागजमै सीमित
राजु सदाको मृत्यु घटना छानबिनका लागि प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० असारमा स्वास्थ्य निर्देशक हरिचन्द्र साहको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । एक साताभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन म्याद दिइएकोमा अहिलेसम्म छानबिन प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन ।
समितिका सदस्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव डा. नवलकिशोर झाले पनि अहिलेसम्म छानबिन सुरु नभएको स्वीकार गरे । डा. झाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिलेसम्म छानबिन सुरु भएको छैन । कहिले सुरु हुने हो, त्यो संयोजकज्यूलाई नै थाहा हुन्छ ।’
त्यस्तै, प्रदेश २ सभाले पनि पाँच सदस्यीय सर्वदलीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । १४ जेठमा नेकपा सांसद रवीन्द्र बैठाको संयोजकतत्वमा गठित समितिलाई पाँच दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन समय तोकिएको थियो । संसदीय समितिले पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । समिति सदस्य चमेलीदेवी दासले प्रतिवेदन लगभग तयार भएको बताइन् ।